SHAQO! Sirdoonka Artifishalka ah ee maareeya saadaalinta dhimashada
Inicio/Sirdhaad dabiici ah/Cilmiga macmalka ah ayaa saadaalin kara goorta qofku dhiman karo
0 3.211 1 daqiiqo akhri
AI-ka oo saadaaliya dhimashada dadka ka dib falanqaynta imtixaannada EKG.
Una sirdoon macmal ah wuxuu ku guuleystay inuu saadaaliyo si sax ah oo ku filan, dhimashada ugu dhakhsaha badan ee qofka sanad gudihiis. AI wuxuu ku saleysan yahay oo keliya natiijooyinka baaritaanka wadnaha ee lagu sameeyo qofka laga hadlayo. Nidaamkan sirdoonku wuxuu awood u lahaa xitaa saadaalin geeri bukaan socodka iyada oo loo marayo qiyamka in dhakhaatiirta caadiga ah gebi ahaanba caadi laga dhigay.
Daraasaddan waxaa daahfuray Dr. Brandon Fornwalt, oo ka socda Xarunta Caafimaadka ee Geisinger, oo ku taal Gobolka Pennsylvania, Mareykanka. Dr Fornwalt, oo kaashanaysa asxaab badan, ayaa AI ku shiday macluumaad fara badan oo laga helay xogta fog. Qiyaastii 1.77 milyan oo baaritaano ah qiyaastii afar boqol oo kun oo qof; AI sidoo kale waxaa la weydiiyay inay sheegto yaa ka weyn fursadaha dhimashada 12ka bilood ee soo socda.
Saadaalinta geerida, ma runbaa mise waa been?
Kooxda cilmi-baarista waxay tababartay laba nooc oo kala duwan oo ah sirdoonka farsamada. Midkoodna, kaliya xogta imtixaanka ayaa la galay (barnaamijyada korontada)Tan labaad, waxaa lagu quudiyey barnaamijyada koronto-dhaliyaha marka lagu daro da'da iyo jinsiga bukaan kasta.
Awoodda mashiinka inuu wax ku dhufto ayaa la saaray iyadoo la adeegsanayo metrik loo yaqaan AUC. Mitirkani wuxuu si aad ah u tixgelinayaa awooda AI si loo kala saaro laba koox oo dad ah, mid ka kooban dad dhintay sanad ka dib saadaasha, iyo mida kale ee ku guuleysatay inuu noolaado. Helitaanka natiijo ah 0.85, iyadoo natiijada ugu sareysa ay tahay 1.
Awoodda AI ee ah in la saadaaliyo geerida waa wax aan weli sharrax ka bixin cilmi-baarayaasha.
Qarsoodi sir ah oo Cilmiga Sirdoonka ah
goorma ayuu qofku dhiman karaa IA AI waxay saadaalinaysaa geeri Sirdhaad dabiici ah qof dhinto saadaalin saadaaliyay geeri
"Deepfakes" lama joojin karo, xitaa ma leh Sirdoonka Artifishalka